तपाईको म्याकबाट भाइरस कसरी हटाउने | समाचार ग्याजेटहरू
ग्याजेट समाचार | 24/03/2022 12:40 | एप्पल
कुनै पनि कम्प्युटर प्रणाली जस्तै, द एप्पलको अपरेटिङ सिस्टममा केही कमजोरी छन्। यी कम्प्युटरमा पहुँच गर्न र क्रेडिट कार्ड वा बैंक विवरणहरू जस्ता गोप्य जानकारीहरू हुन भाइरसहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। धेरै अवसरहरूमा, प्रयोगकर्तालाई पनि थाहा छैन भाइरस को उपस्थितिकिनभने यसको अभिनय शैली मौन र परजीवी छ।
यदि यो तपाइँको मामला हो भने, हामीसँग तपाइँको लागि राम्रो समाचार छ: तपाइँको म्याक को सुरक्षा को लागी धेरै तरिकाहरु छन्। सबै भन्दा राम्रो ज्ञात विधि एक विशिष्ट एन्टिभाइरस स्थापना गर्न हो, यद्यपि त्यहाँ छन्। म्याकबाट भाइरस हटाउने थप तरिकाहरू यसको आन्तरिक कोडले कसरी काम गर्छ भनेर गहिराइमा जान्न आवश्यक छैन।
1 भाइरस के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
2 कसरी Mac बाट भाइरस हटाउन?
2.1 लक्षणहरूमा ध्यान
2.2 स्थापित सफ्टवेयर हटाउनुहोस्
2.3 सुरक्षा सफ्टवेयर को स्थापना
भाइरस के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
को रूपमा चिनिन्छन् कम्प्यूटर भाइरस पहिचान चोरी वा बैंक स्थानान्तरण जस्ता जालसाजी कार्यहरू कभर गर्ने कार्यक्रमहरूमा। तसर्थ, भाइरसहरू सफ्टवेयर हुन् जसको स्थापनाले प्रयोगकर्तालाई थाहा नभएको, पीसीमा रहेको जानकारीमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको पहुँच मानिन्छ।
यद्यपि हामी सामान्यतया तिनीहरूलाई एकान्तर रूपमा सन्दर्भ गर्छौं, त्यहाँ वास्तवमा धेरै भाइरसहरू छन् जुन तिनीहरूमा भिन्न हुन्छन् मोडस परिचालन। सबै, को मालवेयर तिनीहरू ह्याकरहरू वा साइबर अपराधीहरूले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्छन्। म्याकहरूमा आक्रमण गर्न सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने मालवेयरहरू मध्ये ट्रोजन, ransomware, फिसिङ वा एडवेयर हुन्। तिनीहरू मध्ये प्रत्येक फरक तरिकामा सञ्चालन गर्दछ र विभिन्न मार्गहरू मार्फत डेटा पहुँच गर्दछ।
कसरी Mac बाट भाइरस हटाउन?
धेरैजसो भाइरसहरूले निश्चित सफ्टवेयर स्थापना गरेर प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्छन्। यद्यपि, त्यहाँ अन्य संयन्त्रहरू छन् जुन साइबर अपराधीहरूले प्रणाली तोड्न प्रयोग गर्छन्; सन्देशहरू, इमेलहरू, मालभरटाइजिङ... कुनै पनि अवस्थामा, यदि हामीसँग आवश्यक उपकरणहरू छन् भने मालवेयर पहुँच हटाउन सकिन्छ।
ध्यान दिनुहोस् को síntomas
धेरैजसो अवस्थामा, भाइरस अदृश्य र केही समयको लागि निष्क्रिय देखिन्छ। यस चरणमा, साइबर अपराधीहरू गोप्य जानकारी सङ्कलन र जालसाजी कार्यहरू जारी राख्न अन्य उपकरणहरू पहुँच गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यस कारणले गर्दा, धेरै मानिसहरूलाई थाहा हुँदैन कि उनीहरूको म्याकहरू धेरै ढिलो नभएसम्म संक्रमित छन्।
केहि síntomas संक्रमित म्याकले प्रस्तुत गर्न सक्ने कुराहरू हुन्: कार्यसम्पादनमा कमी, नयाँ अनुप्रयोगहरू स्वायत्त रूपमा स्थापना, ढिलोपन, भण्डारण समस्याहरू, चिनजानहरूलाई इमेल र सन्देशहरू ठूलो मात्रामा पठाउने... सामान्यतया, कुनै पनि असामान्य व्यवहार हामीलाई विदेशी तत्वको उपस्थितिमा शंका गर्नु पर्छ।
मेटाउन el स्थापित सफ्टवेयर
यदि खराब सफ्टवेयर स्थापना गरिएको छ र प्रणालीमा फेला पर्यो भने, एप्पल सिफारिस गर्दछ कार्यक्रम हटाउने र रद्दीटोकरीमा पठाउँदै। यो प्रक्रिया द्वारा गर्न सकिन्छ एप्पल को निर्देशन.
स्थापना de सुरक्षा सफ्टवेयर
म्याकमा खतराहरूको उपस्थितिको कारण, त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जसले आफ्नो गतिविधि समर्पित गर्दछ म्याक प्रणाली वृद्धि र सुरक्षा। यी सफ्टवेयरहरूले म्याकलाई सुरक्षित राख्छन् र उनीहरूले शंकास्पद ठान्ने कार्यक्रमहरू सफा र हटाउँछन्। त्यसै गरी, तिनीहरू वेब पृष्ठहरूमा पहुँचको बारेमा चेतावनी दिन्छन् जसको उत्पत्ति तिनीहरूले विश्वसनीय रूपमा पहिचान गर्दैनन्, साथै म्याकको लागि आवश्यक सुरक्षा नभएका अनुप्रयोगहरू।
यसको बावजुद, केहि मालवेयरले सुरक्षा सफ्टवेयरको उपस्थितिमा लिन्छ। त्यसकारण, ट्र्याक रेकर्ड भएका ज्ञात कार्यक्रमहरूमा जान सल्लाह दिइन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » एप्पल » तपाईको म्याकबाट भाइरसहरू कसरी हटाउने